Alamino mora foana ny mpiasa sy ny lahasao amin'ny fampiasana ny fampidirana an'i Asana amin'i Zeevou
Asana sy Zeevou Integration
Ny iray amin'ireo tanjona lehibe apetraky ny mpitantana ny fanofana maharitra rehetra dia ny fanitarana ny portfolio. Na dia mety hahasoa tokoa aza ny fanitarana paikady, dia misy fotoana tsy maintsy manakarama mpiasa bebe kokoa ianao mba ho lohalaharana amin'ireo asa rehetra. Izany no mahatonga ny ekipa maro hitodika any amin'ny lozisialy toa an'i Asana hanampiana azy ireo handamina, hanome ary hanaraka ny fandrosoana amin'ny lahasa. Satria manan-danja ho anay ny fandrosoan'ny Mpiara-miasa aminay, dia mieritreritra fomba fiasa vaovao foana izahay hanomanana ny làlana fitomboana ho anao, ary eto izahay miaraka amin'ny fampidirana Zeevou sy Asana. Ireo mpampiasa Asana dia mandray ny paikadin'ny fikambananany amin'ny alàlan'ny fametrahana ny lampihazo mankany Zapier, izay ahafahan'izy ireo manamboatra ny fivezivezeny Asana amin'ny Zaps mitahiry fotoana. Miaraka amin'ny fampidirana 100+, ao anatin'izany ny Evernote, Trello ary Gmail, azonao atao ny mitondra izay rehetra ilain'ny ekipanao hifandraisana, hiaraha-miasa ary handrindrana ny asa.
Mijanona milamina sy mifandray
Mamorona asa amin'ny fe-potoana
Araho ny asa rehetra mifandraika amin'ny fanananao tsirairay
misoratra anarana amin'i Asana